Raveloson Constant : « izay iray isika tra-parany ! »
«Tsy manan-katokona intsony ilay kely» hoy Raveloson Constant. Ny fihetsiketsehena ivelany sisa ataon’i tgv dia mirona mankany amin’ny fanalam-baraka ny tenany sy ny fiainan-tokantranony sisa. Toy izany ohatra ny fambolena reniala na « baobab » tany Morondava ka nampitondrana ny anarany sy ny vadiny. Manginy fotsiny ny fiaraha-mandihy amin’ny mpanakanto izay mampietry avy hatrany ny firenena izay ireherehany fa izy no mitondra azy.
Mafy loatra amin’ny mpanongam-panjakana ny fisedrana mikasika ny fazahoana ny fankatoavana iraisam-pirenena ka vao maika milevim-belona i tgv. Ny hetsika etsy sy eroa mitaky ny zo fototra amin’ny sehatr’asa isan-karazany mantsy dia manaporofo fa tsy misy vola intsony hampiasain’ny FATE hany ka tsy voafehy intsony ny momba ireo fitakiana ireo. Mipoitra avokoa ankehitriny ny tondro mamporisika ny fanilihana ny mpanongam-panjakana. Ny fihetsika izay ataon’ny lehiben’ny hery famoretana rahateo dia efa mampibaribary fa vonona hifamono amin’ny namany izay ao anaty fitondra ihany koa ny Jly Baomba. Izany hoe efa tsy misy zavatra mandeha intsony ka dia ambarany ho ren-tany ren-danitra fa « tifirina avy hatrany izay fiaran’olom-boatendry tsy mety sakanana ». Farany dia nambaran’i Raveloson Constant fa «tsy afaka mampandeha ny goverenemanta intsony koa Beriziky ». Tsy miray saina veliively ny ministra ao anatin’ny governemanta Beriziky noho ny fisian’ny olon’ny FATE mibahana ny fihodinan’ny tondro zotra. Manaporofo izany ohatra ny ora valo lany nanaovana filan-kevitry ny governemanta omaly saingy tsy nahitam-bokany. Filan-kevitra izay nijerena manokana ny fanatanetarahana ny fitoniana eto Madagasikara indrindra fa ny mikasika ny andininy faha-20 ao amin’ny tondro zotra. Raha ny fahitan’i Constant azy dia mila mijoro manala ireo rehetra mibahana ny praiministra raha tena mbola ny tondro zotra no mibaiko azy. « Tokony alefa any Ambatobe ireo minisitra manompo an’i tgv » hoy izy « ary any izy ireo no asaina manangana governemanta rehefa tsy hiaraka amin’ny be sy ny maro ».
Herinandro fiomanana …
Ela niandrasana hetsika ivelan’ny Magro ny mpandala ny ara-dalàna ka hahazo fahafaham-po. Fanombohan’ny fiovana endrika omena ny tolona ny hetsika omanin’ny olom-boatendry eny amin’ny Kianjan’Ambohijatovo. « Tsy maintsy tontosa ny tatitra ataonay » hoy ny filohan’ny vondrona parlemantera Ankolafy RAVALOMANANA ao amin’ny kongresy. Nambaran’i Mamitiana Ravelonanosy fa tsy ho an’ny Filoha RAVALOMANANA irery intsony no itolomana ankehitriny fa ny hanavotana ny Firenena manontolo mihitsy. Tsy afa-misaraka anefa izany satria mifanindran-dalana sady mifameno tanteraka. Ny tanjon’ny Ankolafy dia ny ahafahana mampita ny vaovao marina mikasika ny asa izay nataon’izy ireo any anaty parlemanta.
Tsy azo ianteherana manko ny hainoamanjerim-panjakana nefa mila mahazo ny vaovao marina ny mpiray tanindrazana. Famerenana sahady ny zo fototra hahazo vaovao izany satria tao anatin’ny telo taona mahery dia nohosen’ny mpanongam-panjakana io zo fototra io. Andrasana arak’izany ny vahaolana haroson’ny SADC izay mivory any Gaborone Botwana satria efa natolotra azy ireo ny taratsy momba an’i Madagasikara. Tsy manakana ny fiomanana amin’ny hetsika goavana iarahan’ny olom-boatendry sy ny vahoaka anefa izany koa nanentana ny mpiara-mitolona ny depioten’Ankazobe mba « ho taratry ny hetsika hatao eny Ambohijatovo ny eo amin’ny Magro manomboka ny alatsinainy hoavy izao ».
Mitsangana ry tanora …
Mitaky andraikitra amin’ny salan-taona isan-tsokajiny ny fanavotana ny Firenena. Henatra ho an’ny tanora manokana anefa ny fitiavan-tenan’ny mpanongam-panjakana izay sahy nijoro fa misolotena azy ireo. Manomboka eto ary dia hanamafy ny tolona ataony ny tanora mpandala ny ara-dalàna rehetra. Hanomboka any anatin’ny fokontany misy ny tsirairay izany ka tanjona ny handresy lahatra izay mbola misalasala mba hanamafisana orina ny fanarenana ny Firenena. « Ampy izay » hoy ny mpandrindra ny TIM Tanora « tsy hihemotra isika tanora ary ho porofointsika fa aty amintsika ny fitiavan-tanindazana ary any amin’ny FATE ny fitiavam-bola».
28 Aprily 2012 : Ambohijatovo no tanjona ! (+vidéo)
Miantso ny vahoaka Malagasy rehetra ny CST sy CT avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ny sabotsy 28 aprily hoavy izao. Tatitra mikasika ny fizotran’ny tetezamita sy ny andraikitry ny olom-boatendry ao anatiny no hataon’izy ireo amin’izany. Fotoana ihany koa hanararaotan’izy ireo hizarana amin’ny mpiray tanindrazana ny andraikitra tokony ho raisin’ny vahoaka manoloana ny fikatsoan-javatra amin’izao fotoana.
Antso avo amin’y fifanomezan-tanana no nataon’ireo olom-boantendry ireo tamin’ny mpandala ny ara-dalàna androany satria manoloana ny hetsika politika sy sosialy etsy sy eroa dia tokony atao matotra tsara amin’ny mpiara-monina ny foto-kevitry ny mpandala ny ara-dalàna amin’ny ankapobeny sy ny Ankolafy RAVALOMANANA manokana. Andran’asa ho an’ny mpiara-mitolona ihany koa ny fanomanana io andro iray io araka ny nambaran’ny solotenan’ny CT sy CST satria tokony ho hita maso amin’izany ny fahavitrihan’ny mpiray tanindrazana hitady ny vahaolana sy hamerina ny Filoha RAVALOMANANA. Hatreto aloha dia ny Kianjan’Ambohijatovo no fantatra fa hanatanterahana ny hetsika saingy miankina betsaka amin’ny fahatsiarovan-tenan’izay milaza fa mandidy ny renivohitr’i Madagasikara ny fahazahoana izany. Fitsapana ho azy ireo ihany koa mialohan’ny hiverenan’ny fahefana amin’ny ambany lanitra.
13 andro sisa … (+vidéos)
Vao nirehitra voalohany ny afon’ny mpanongam-panjakana dia ireo very asa no tra-boina voalohany. Ny 26 janoary 2009 dia analiny ny mpiray tanindrazana very asa indrindra teto an-drenivohitra. An-jatony ihany koa raha kely ireo very fihariana noho izany alatsinainy mainty izany ary mbola nitombo izany tao anatin’ny telo taona. Raha ny antotan’isa farany dia mahatratra 250 000 ireo very asa na mivantana na an-kolaka noho ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009 sy ny krizy politika mbola mitohy hatramin’izao.
Ny olona nitarika izany fanimbana sy fandrobana ary famoana mpiray tanindrazana izany ankehitriny no tadiavin’ny minisitry ny fitsarana FATE hatao tsy maty manota. Noho izany dia manana adidy ny hampahafantatra an’izao tontolo izao ny zava-misy marina ireo rehetra very asa noho izao krizy izao. Indrindra fa amin’ny andron’ny voalohan’ny volana may izay ankalazan’izao tontolo izao ny zo fototra hanana asa fivelomana izay nohitsahin’i tgv sy ny namany ary natakalony tombontsoa manokana sy fangoronan-karena mihoa-papana.
Antson’ny very asa
Mahatsiaro tena fa tsy mahavita irery anefa ireo very asa ireo. Androany ary dia niantso ny fijoroan’ireo fikambanana rehetra niforona tao anatin’ny tolona ny fikambanan’ny very asa. Ho an’izy ireo mantsy dia ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara ihany no hamerina amin’ny ara-dalàna ny fiainana ara-tsosialy sy ara-politika eto amin’ny Firenena.
Hasin’ny tanindrazana : tsy mbola nitondra soa ny fanosena ny safidim-bahoaka (+vidéo)
Ohatra velona eto Madagasikara ny nahazo ireo rehetra nanao zinona ny feon’ny vahoaka. Isan’ny nampalaza ny fanjakana Malagasy hatramin’ny andro faha-mpanjaka ny fanajana izany hetahetam-bahoaka izany. Hatramin’izany fotoana izany ka mandrak’androany koa anefa dia nisy hatrany ny nihevitra ny tenany ho afaka mandidy sy ambonin’izany feon’ny ambany lanitra izany.
Hatramin’ny taona 2009 no mankaty dia maro tamin’ireo tazana niseho nanohana ny Filoha RAVALOMANANA no ratsy fiafara tamin’ny fiainany. Na amin’ny maha-mpanao politika azy na amin’ny maha-olona azy. Tsy sanatria manana fahefana hafahafa ny Filoha fa ny feon’ny vahoaka nifidy azy no manan-kasina ka zary ozona ho an’izay sahy manota fady azy. Ireo mpanao politika tsy matotra ara-poto-kevitra sy mifikitra loatra amin’ny tombontsoany manokana no tena nibaby, mibaby ary mbola hibaby ny sazin’ny feon’ny vahoaka. Ny feon’ny vahoaka rahateo feon’Andriamanitra hoy ny fitenenana.
Ny andraiktra miandry …
Ny hamerina ny hasin’i Madagasikara no tena andraikitra maindry ny olom-pirenena vanona rehetra. Hasina fototra iorenan’ny tany repoblikana ny maha-tan-dalàna azy. Ny hiverenan’izany rahateo no niaretan’ny vahoaka maro an’isa manerana ny Nosy ny tolona nandritran’ny telo taona be izao. Ny antso nataon’ny Filoha RAVALOMANANA farany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana dia nanentana ny Malagasy hiady mafy hiverenan’ny demokrasia tena izy eto amintsika. Mialohan’ny handraisan’ny vahoaka ny adidy masina amin’ny fanavotana ny Firenena anefa dia ny fanazavan-kevitra sy ny fanapariahana araka izay azo atao ny fonjan-kevitra ijoroan’ny tolona no adidy voalohany tokony hatrehina. Nisy avy hatrany ary ny raki-kevitra santatra entina manatanteraka izany ary mijoro ho fanilo mitarika ny fanapariahana azy ny mpandala ny ara-dalàna.
ASA.doc 1.54 Mo
Filoha RAVALOMANANA Marc : « raiso ny andraikitra ! »
Hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra sy ireo mpitari-tolona notendrena hiditra anaty fitantanana no nentin’ny Filoha RAVALOMANANA Marc androany. « Samia mandray ny andraikitra tandrify azy hamerenenana ny demokrasia eto Madagasikara » hoy izy. Nomarihiny fa izany no antony goavana indrindra nanaovana sonia ny tondro zotra tamin’ny volana septambra 2011. Nampisehon’ny Ankolafy RAVALOMANANA fa manam-piniavana hamaha ny krizy izy ireo ary vonona ny hifamela sy hitady ny lalana hampandrosoana ny Firenena. « Ankehitrinyanefa dia zavatra hafa no mitranga » hoy ihany ny Filoha.
Nazavainy ary fa ny lalàna momba ny famotsoran-keloka izay tokony hitarika any amin’ny fifampihavanana dia nanehoan’ny mpanongam-panjakana ny fankahalana azy manokana. « Tsy mitondra vahaolana amin’ny krizy izany » hoy ny Filoha RAVALOMANANA « ary tokony tsaroan’izy ireo fa tsy mila izany famotsoran-keloka izany aho ». Tsy sasatra moa ny Filoha mamerina fa tsy manan-kery ny fitsarana nitsara azy ary ny lalàm-panorenana dia mamaritra mazava fa tsy azo tsara amin’ny fomba toy izany ny Filoham-pirenena. Araka ny fanazavana nentin’ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA dia tsy afaka miolonolona irery i Madagasikara fa tsy maintsy miaraka amin’ireo hery ivelany afaka mifanampy aminy. Ny fandraisana andraikitra hamerenana ny demokrasia amin’ny alalan’ny fifidianana mangaraharaha hoy izy dia hamerina indray ny fanampianana hampandrosoana an’i Madagasikara. Namporisihiny hatrany ny vahoaka Malagasy mba hametraka an-tanan’Andriamanitra ny fianam-pirenena sy ny fiainanan’ny mpiray tanindrazana tsirairay avy.
Famerenana ny ara-dalàna : miova endrika ny tolona (+vidéos)
« Tapitra ny ala-nenina, vaky ny ady » hoy ireo mpitari-tolona rehetra androany. Araka ny fanazavana nentin’izy ireo dia « tsy azo resahina toy ny olom-banona ny mpanongam-panjakana ». Manaporofo izany ny toe-tsaina nentin’izy ireo nandany ny lalàna momba ny famotsoran-keloka. Mibahana ny famahana ny krizy ny fankahalana ho azy ireo hany ka tsy mikatsaka ny hamahana ny krizy izy ireo fa manao izay tsy hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA an-tanindrazana fotsiny ihany. Manomboka eto ary dia endrika vaovao no entina manohy ny tolona ho an’ny famerenana ny ara-dalàna.
Henri Randrianjatovo :
Ignace Randriamamizafy :
Any amin’ny vahoaka ny fahefana …
Andraikitra takian’ny tolona amin’ny vahoaka ny fampivondronana ny hery mbola misalasala hijoro hiady amin’ny tsy rariny. Noho ny tsy fanajan’ny FATE ny fiaraha-manana ny Firenena dia haka toerana ahafahana manao tatitra amin’ny mpiray tanindrazana ireo olom-boatendry mba hizarana ny tsy fahamarinana sy ny adidy nantrehina nandritra izay volana maromaro izay. Raha mbola manamafy sofina anefa ireo fanetriben’ny Firenena dia homena ny vahoaka manontolo ny hitsara ny fitondran-tenan’izy ireo ka ny valala bemandry no hanasazy amin’ny fomba hitany fa mifanaraka amin’ny tsy mety nataon’ny mpanongam-panjakana teto amin’ny tanindrazana iombonana.
Fanatera Longin : « hatolontsika azy ny aintsika » (+vidéo)
«Raha mbola misy misakana ny Filoha RAVALOMANANA hatramin’ny faran’ny volana » hoy ny solombavam-bahoakan’i Beloha Androy « dia mivonona fa hatolontsika azy ny aintsika ». Mafonja sady mavesa-danja ny fanambarana nentin’ity mpikambana ao amin’ny filan-kevitra ambonin’ny tetezamita ity teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka androany. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fotoana iadiana hevitra momba ny famotsoran-keloka no nitondrany izany nanoloana ny mpiara-mitolona satria «mitady hamono ny Filoha ny mpanongam-panjakana » araka ny fanazavany.
Nambarany fa ny Soratra Masina dia efa nanambara fa « tsy misy manam-pitiavana ambony indrindra miahoatra ny mahafoy ny ainy ho an’ny tiany ». Ho an’ny tia tanindrazana rehetra arak’izany dia ny fahafoizana ny ainy ho an’ny Filoha RAVALOMANANA no marika ambony indrindra maneho ny fitiavana an’i Madagsikara. Mbola iombonan’ny maro an’isa mantsy hatreto fa ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA ihany no hanavotra ny Firenena izay latsaka anaty lavaka noho ny fanonganam-panjakana. Nomarihin’i Longin tany am-piandohan’ny lahateniny fa ny hamerenana ny Filoha RAVALOMANANA no fototra nahatonga azy ireo nanaiky ny hiditra anaty fiaraha-mitantana saingy rehefa tsy voahaja izany dia tsy sarotra ny mandray fepetra na dia izay henjana indrindra aza. Tao anatin’izay indrindra no nametrahany fanontaniana ho an’ny praiministra raha vitany na tsia ny mampanaja ny tondro zotra izay nolazain’i Beriziky fa mpibaiko azy nanomboka tamin’ny fotoana nanendrena azy. Hatreto mantsy dia tsy taza-maso ny fahamarinan’izany.
Famotsoran-keloka : tsy maty manota i tgv ? (+vidéo)
Tsy nampidirna ao anatin’ny heloka tsy mahazo famotsoran-keloka ny fandorana olona anaty trano na ny fitanan olona ka nahafaty azy noho ny hain-trano. Izany no isan’ny ota fady govana tsikaritry ny ankolafy RAVALOMANANA tao anatin’ilay volavolan-dalàna mikasika ny famotsoran-keloka. Izany hoe ity lalàna ity dia saika nampandaniana ny parlemanta an-jambany fotsiny mba hamafana ny heloka vitan’i tgv tamin’ny 26 janoary 2009.
Tsaroana etoana ireo mpiray tanindrazana an-jatony namporisihina nandroba izay lavo tamin’ny afo natsangan’ny ekipan’i tgv ary nahazo ny tso-dranon’ity farany. Ny andininy faha-434 sy 435 ao amin’ny lalàna momba ny ady heloka eto Madagasikara anefa dia mamaritra izany ho hadisoana mampigadra mandra-pahafaty saingy dia vitan’ny minisitry ny fitsarana FATE ny nihevitra ny Malagasy ho tsy mandinika ka nametraka izany ho heloka mahazo famotsorana avy hatrany. Nihevitra tokoa ny maro fa natao hanilihana ny Filoha RAVALOMANANA ity lalàna iray ity saingy tsy tany no tanjon’ny mpanongam-panjakana fa ny hiarovana ny mpitarika azy tsy ho azo helohina mandrakizay.
« Tsy ombalahy tanimanga …»
Isan’ny mbola kianin’ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita ihany koa ny fikasan’ny FATE handidy ny lalàna iraisam-pirenena mikasika ity resaka famotsoran-keloka ity. Tsy vitan’ny sakanana tsy hahita ny tahirin-kevitra nataon’ny SADC izy ireo fa terena ihany koa ho sahy hametraka fenitra vaovao mikasika ny « amnistie » ka hitsipaka izay efa voafaritry ny fifanarahana iraisam-pirenena manan-kery rehetra. Takian’izy ireo ary ny hametrahana izany eo am-pelatanan’ny fitsarana iraisam-pirenena mba ho rafitra mahefa no hamatraka ny fenitra tokony harahina. Raha ho tohizana kosa ny dinika dia tokony izay volavolan-dalàna niaraha-nanapaka tao amin’ny filan-kevitry ny ministra no haroso. Notsipahin’ny minsitra avy amin’ny ankolafy RAVALOMANANA ihany koa mantsy ilay tonga teny amin’ny parlemanta. Fa ny tena goavana dia ny tokony hanajana ny vaomiera iraisan’ny andrim-panajakana izay efa nifanarahana tany amboalohany mba tena hisian’ny ady hevitra lalina sy miorina mialohan’ny handaniana ny lalàna mikasika ny famotsoran-keloka.